Duulimaadyada Jet2 ee Spain ayaa la joojiyey cabsi laga qabo caabuqa Corona. – Geelle Magazine
Waxaa iminka soo baxaya warar kala duwan oo sheegaya in diyaaradda Jet2 ee kusii jeeday dalka Spain la weeciyey duulimaadyadeedii, iyadoo dhammaan duulimaadyadii ka imaan jiray barriga, Balearic Islands iyo Jasiiradaha Canary oo kusii jeeday dhulwahnaha Spian la joojiyay sababo la xiriira caabuqa Coronavirus-ka.
Kiisaska ilaa iminka la xaqiijiyay ee dalka Spain ayaa kor u dhaafaya 1,500 24-kii saacadood ee lasoo dhaafay.
Tirada dhimashada ee Spain ayaa gaartay 120 qof , waxaana lagu wadaa in ay gasho xaalad deg deg ah muddo labo todobaad ah.
Maamulka diyaaradda Jet2 ayaa sheegay in caafimaadka iyo badbaadada macaamiishooda ay tahay muhiimadooda koowaad.
Sida la xaqiijiyay hakinta shaqada diyaaradan ayaa timid iyadoo cunug dhashay dalka Ingiriiska iyo hooyadiiba laga helay cudurka ‘coronavirus’.
Dhaqaatiirta Caafimaadka ayaa isku deyaya in ay xaqiijiso bal in ilmaha oo laga baaray Waqooyiga Middle sex Hospital, inuu ku dhacay cudurka dhalashada ama kahor, sida ay qortay Jariidada The Sun.
Talada dowlada ayaa ah inaysan jirin “cadeyn caafimaad” oo soo jeedineysa in Fayruska lagu kala qaado caanaha naaska.
“Infekshanku wuxuu ku faafaa ilmaha si la mid ah qof kasta oo kaa ag dhaw,” ayey tiri.
Raiisel wasaaraha dalka UK Boris Johnson ayaa hada la kulmaya mas’uuliyiinta Downing Street si ay u gala hadlaan faafitaanka cudurkan.
22 qof kale oo dheeri ah ayaa laga xaqiijiyay inuu ku dhacay Wales, taas oo wadarta guud ee UK lagu xaqiijiyay 820 qof, 11 qof kale ayaa dhintay.
Laakiin qiyaasta dawladda ee tirada dhabta ah ee kiisaska ayaa ahayd 5,000 ilaa 10,000, illaa Jimcihii.
Diyaaradda Jet2 waxay duushaa meelaha ay ka mid yihiin Alicante, Malaga iyo Lanzarote oo ka kala yimid sagaal garoon diyaaradeed ee Boqortooyada Ingiriiska.
Waxay sheegtay in ay go’aansatay in ay baajiso duulimaadyada kadib markii mas’uuliyiinta Isbaanishku amar ku bixiyeen in baararka, makhaayadaha iyo dukaamadaba la xiro.
Af-hayeenku wuxuu intaas ku daray, “Waxaan ognahay in talaabooyinka maxalliga ah ay saameyn weyn ku yeelan doonaan ciidaha macaamiisheena, waana sababta aan u qaadanay go’aankan,” afhayeen u hadlay shirkadaha diyaaradaha ayaa intaas ku daray.
“Tani waa xaalad deg-deg ah oo murug badan, waxaanan dib u eegis ku samaynaynaa barnaamijkeenna xaaladda deg dega ah, si aan macaamiisha ugu celino Ingiriiska.” Ayuu intaasi daray hadalkiisa.
Macluumaadka la socodka duulimaadka ayaa muujinaya ugu yaraan shan diyaaradood oo Jet2 ah oo u safraya Spain in ay u jeesteen in ay ku noqdaan UK.
Dale Dixon, oo 26 jir ah, kana soo jeeda magaalada Pontefract ee Galbeedka Yorkshire, waxaa la filayey inuu ka duulo Alicante, kuna sii jeedo Bariga Midlands Airport saacaddu markay ahayd 11:45 GMT.
Waxaa jiray dareen ah “is-huurid” dhinaca garoonka diyaaradaha ah, isagoo leh: “Waa la buux dhaafiyay halkaan. Waxaa jira caruur jiifsan hareeraha boorsooyinka oo ku baahsan meesha. Dadku runtii waa argagaxeen.”
Mark Holrisonmaker Mark Harrison, oo u duulaya gurigiisa oo ku yaalla magaalada Manchester ayaa loo qorsheeyay fiidnimadan caawa, wuxuuna yiri: “Jet2 ma la xiriiri karno sidaas darteed waxaan sugeynaa inaan ka maqalno wax uun”.
Halka Christine Jones oo ka socota Rochdale ee wales ay filaysay in ay duullimaadka Jet2 ah ku tagto Tenerife, iyada iyo seygeeda 14:20 GMT.
Waxay tiri: “Fariintii ugu dambeysay ee aan xalay ka helnay shirkada waxay yiraahdeen waxay sugayaan in ay na arkaan. Waxaan si buuxda diyaar u nahay una diyaarsan nahay boorsooyinkeena laakiin meelna uma socdo hada. aniga oo eegaya shandadaha. ”
Dhanka kale, shirkadda safarka ee Tui ayaa baajisay dhammaan ciidaha Spain oo la qorsheeyay in ay bilowdaan inta u dhaxaysa 14 iyo 16-ka Maarso.
Jimcihii, shirkadda British Airways waxay ka digtay in ay u baahan tahay in ay duullimaadyada dhulka ka dhigto “sidii hore oo kale” isla markaana ay shaqa joojin u dirto shaqaalaha si ay uga digtoonaadaan cudurka ‘coronavirus’. Ryanair ayaa u sheegay shaqaalaha in lagu qasbi karo in ay fasax galaan Maalinta Isniinta ah.
Aarinkan ayaa kusoo aadaya iyadoo ilo wareedyo dowladeed ay sheegeen in isu imaatinka dad weynaha laga yaabo in dhowaan laga mamnuuco gudaha dalka Ingiriiska si loo yareeyo culeyska saaran howlaha gurmadka. Waxaa loo maleynayaa in xayiraadda ay dhaqan gali karto bilowga usbuuca soo socda.
Tirooyin badan oo ka mid ah cayaaraha iyo dhaqamada ayaa horay looga joojiyay guud ahaan dalka iyada oo laga jawaabayo masiibadan.
Markii ay dawladdu ku dhawaaqday in ay u dhaqaaqday marxaladda “daahida” ee jawaabteeda fayraska, ayay mas’uuliyiintu cadeeyeen in mamnuucida isu imaatinka dadku ku badan yahay miiska la saarayo.
Laakiin ma ahan in la yareeyo faafitaanka fayraskan. Qofka cudurka qaba waxay u badan tahay inuu u gudbiyo kuwa ay aad isugu dhow yihiin, sida suumanka ay dadku ku jiraan 2m (6.56ft) oo iyaga ka mid ah 15 daqiiqo ama ka badanba.
Markaa haddii aad joogtid goob-wadareed ballaaran, oo aad ku dhow dahay qof baarka ka socda ama aad ku safraysid tareen, waxaa jira halis ah gudbinta caabuqan. Waxaa kale oo jira cadeymo badan oo muujinaya in halista ay hooseyso haddii aad bannaanka joogtid. Haddii aad mamnuucdo isu imaatinka dadka waa weyni, dadku waxay isugu yimaadaan meelaha kale, sida baarka.
Taaba dalkeed, xayiraadahan waa inuu yareeyo culayska saaran adeegyada gurmadka deg degga ah ee imanaya. Waxaa had iyo jeer la saadaalin jiray in tan la samayn doono markii aan bilownay in aan aragno koror la taaban karo oo la xiriira tirada kiisaska, taasi oo loo maleynayo inuu ugu yaraan usbuucyo ka maqan yahay.
Haddii ay dowladdu si dhaqso leh wax uga qabato arrintaas usbuuca soo socda oo aad moodo inuu soo jeedinayo, waxay astaan u tahay isbadal ku yimid qaabkii horay loo sii waday. Saraakiisha ayaa laga yaabaa in ay dareemaan in ay si dhaqso leh ugu soo duulaan halkii laga qorsheeyay go’aanka Premier League iyo kuwa kale in la kansalo dhacdooyinka awgeed ama xaqiiqda ah in ummadaha kale ay qaataan tillaabooyinkan.
Laakiin haddii ay weli ku sii shaqeynayaan waqti dheeri ah, wax badan isma beddelayaan ilaa Khamiista.
Suldaan Siciid Suldaan Cabdisalaan iyo wefti uu hogaaminayo oo Garowe soo gaarey.